Booliiska dalka Britain ayaa waxay shaaciyeen magaca nin Soomaali ah oo loo haysto dilkii xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka dalkaasi | Qaran News
Booliiska dalka Britain ayaa waxay shaaciyeen magaca nin Soomaali ah oo loo haysto dilkii xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka dalkaasi
Writen by Qaran News | 3:47 am 17th Oct, 2021
XIGASHADA SAWIRKA,PA MEDIA
Qoraalka sawirka,Waxaa baroor-diiq lagu qabtay meel u dhaw goobtii lagu dilay Sir David Amess
Booliiska dalka Britain ayaa waxay shaaciyeen magaca nin Soomaali ah oo loo haysto dilkii xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka dalkaasi.
Ninkani oo magaciisa lagu sheegay Cali Xarbi Cali – ayaa la rumeysan yahay in uusan ku jirin liiska dadka ay diiradda ku haysay hay’adda sirdoonka Ingiriiska ee MI5.
Waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in ninkani loo xiray tuhunka ah inuu dilay xildhibaan David Amess, uu horey uga qeyb galay barnaamij dowladda UK ay fulisay oo looga hortagayay xagjirnimada.
Cali Xarbi Cali-oo 25 jir ah oo haysta dhalashada Ingiriiska , balse asal ahaan Soomaali ah ayaa lagu xiray goobtii lagu tooriyeeyay xildhibaanka.
Booliiska ayaa Sabtidii baaray laba cinwaan oo ah aagga London islamarkana ma jiro qof kale oo ay imika ku raad-joogaan.
Wuxuu ninkani ku xiran yahay imika Saldhigga Boliska ee Essex, halkaasi oo ay Su’aalo ku waydiin doonaan waaxda booliiska ee ka hortagga Argagixisada.
Booliiska ayaa laga yaabaa inay sii hayaan ninkan illaa Talaadada ka hor intaanay ku soo oogin dacwad, ama aysan sii daayaan.
Ilo -wareedyo ka tirsan dowladda ayaa BBC -da u sheegay in sua’aalaha ilaa iyo imika la waydiiyay ninkan u dashay UK uu u muuqday inuu asal ahaan yahay soomaali.
Weriyaha BBC u qaabilsan amniga Frank Gardner ayaa sheegay in saraakiisha Whitehall ay sheegayaan in ninka la xiray uusan ku jirin liiska dadka looga shakisan yahay argagixisada.
Heerka Feejignaanta UK ayaa wax wayn iska badalay tan iyo Jimcihii taasoo la micno ah in weerar argagixiso la filan karo.
Sir David, oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa xisiga muxaafid tan iyo 1983, ayaa kulamadiisii ​​caadiga ahaa ee jimcihii la lahaa xubno ka tirsan kaniisadda Belfairs Methodist markaasi oo dhowr jeer tooreey lala dhacay.
69 jirkan ayaa waxaa uu ifka uga tagay afar gabdhood iyo wiil.
Qoraalka sawirka,Sir David
Weerarkan ugu dambeeyay wuxuu dhaliyay walaac ku aaddan badqabka mudanayaasha, oo badankoodu kulamo ku qabta deegaanadooda kuwaasi oo qof walba uu ka soo qeyb geli karo.
Xoghayaha arrimaha gudaha Britain Priti Patel ayaa sheegtay in la diyaariyay tallaabooyin lagu sugayo amniga xildhibaanada, balse waxay ku adkaysatay inay sii wadi doonaan u adeegidda dalka si carqalad la’aan ah.
“Waan sii wadi doonnaa, waxaan ku dhex nolnahay bulsho furan oo dimuqdimuqraadiyad ah,” ayay tiri mar ay booqatay goobtii uu weerarku ka dhacay iyada o ay la socdaan ra’iisul Wasaare Boris Johnson, hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Sir Keir Starmer iyo afhayeenka baarlamaanka Sir Lindsay Hoyl.
“Ma jirto Shakhsi na cabsi galin kara ama dhiirigalin kara inuu naga joojiyo inaan shaqeyno, si aan ugu adeegno dimuqraadiyadda aan dooranay.”
Ms Patel waxay carabka ku adkeysay in kulamada fool-ka-fool ah ee lala yeelanayo dadka soo doortay ay sii socdoonaan.
Si kastaba ha ahaatee, Tobias Elwood – oo xildhibaan ka tirsan xisbiga Muxaafidka wuxuu soo jeediyay in mudanayaashu taleefoonka kula hadlaan dadka soo doortay ama ay kulan kula qaataan aaladda Zoom-ka.
Xildhibaan Diane Abbott oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ayaa sheegtay inay doorbideyso in iyada oo ay muraayad u dhaxeyso la kulanto dadka soo doortay si ay uga hortagto weerarro toorreyda loo adeegsado .
Qoraalka sawirka,Dadka ayaa ubaxyo dhigayay goobta ay tacsida ka socoto
Dareenka shacabka deegaanka xildhibaanka la dilay
Dareenka shacabka Leigh-on-Sea, oo uu Sir David matalayay muddo tobanaan sano ah, ayaa ah mid uu jahwareer ka muuqdo.
Shacabka magaalada Essex ayaa isugu soo uruuray bannaanka Kaniisadda Methodist halkaas oo ahayd goobtii lagu weeraray xildhibaanka muddada dheer xilka hayay.
Baroor-diiqa loo sameeynayo Sir David oo Jimcihii la dilay ayaa wali ka sii socota deegaankii uu matalayay muddada dheer